शरतसिंह भण्डारी हुनुभयो राजपा नेपालको चौथो संयोजक, राजकिशोर र अनिल बन्न सक्नुहुन्छ सयोजक ? | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » शरतसिंह भण्डारी हुनुभयो राजपा नेपालको चौथो संयोजक, राजकिशोर र अनिल बन्न सक्नुहुन्छ सयोजक ?
शरतसिंह भण्डारी हुनुभयो राजपा नेपालको चौथो संयोजक, राजकिशोर र अनिल बन्न सक्नुहुन्छ सयोजक ?
SAHARA TIMES Wednesday, March 20, 20190No comments
काठमाडौ चैत ६ गते । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अध्यक्षमण्डलको संयोजकमा शरतसिंह भण्डारी नियुक्त हुनुभएको छ । दुई दुई महिनामा चक्रीय प्रणाली अनुसार संयोजक फर्ने प्रावधान विधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सोही अनुसार भण्डारी चैत ६ गतेदेखि लागु हुने संयोजकत्वमा नियुक्त हुनुभएको राजपा नेपालका महासचिव केशव झाले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य उपचारका लागि भन्दै शरतसिंह भण्डारी र पार्टीका वरिष्ठ नेतृ एवं प्रतिविधिसभा सदस्य निर्जला राउत भारतमा हुनुहुन्छ ।
२०७४ बैशाख ७ गते ६ वटा दल मिलेर राजपा नेपाल गठन भएको थियो । शुरुमा महन्थ ठाकुर संयोजक बन्नुभयो । पार्टीको अनौपचारिक निर्णयले उहाँलाई नै संयोजक रही रहनु भनेको थियो । ठाकुर २१ महिनासम्म संयोजक रहनु भयो । तर गत मंसिरमा राजेन्द्र महतोहरु पवन मिथिला होटलको गोप्य बैठक बसेर ठाकुरलाई हटाउन निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णय अनुसार ठाकुरलाई संयोजकबाट हटाएर राजेन्द्र महतो संयोजक बन्नुभएको थियो । दुई महिनापछि उहाँ हटेपछि महेन्द्र राय यादव बन्नुभयो । उहाँको दुई कार्यकाल सकेपछि अहिले शरतर्सिंह भण्डारी बन्नुभएको छ । भण्डारीपछि अनिल झा र त्यसपछि राजकिशोर यादव संयोजक बन्नुहुनेछ ।
तर बैशाखमा महाधिवेशन भएपछि राजकिशोर र अनिल संयोजक बन्न पाउनु हुनेछैन । यद्यपी बैशाखमा महाधिवेशन हुने सम्भावना धेरै कम रहेको छ । किनभने महाधिवेशनको कुनै तयारी पुगेको छैन ।